NASA inopa Bedrest Zvidzidzo Kondirakiti kuDLR
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » NASA inopa Bedrest Zvidzidzo Kondirakiti kuDLR
NASA yakasarudza Deutsches Zentrum fur Luft-und Raumfahrt (DLR) yeCologne, Germany, kuti ipe kushandiswa kwenzvimbo yayo kutsigira tsvakiridzo yenguva refu yekuzorora pamubhedha.
Iyo $49.9 miriyoni yeBedrest Studies Contract ichatsigira nhevedzano yezvidzidzo zvekuzorora pamubhedha panzvimbo yekambani muCologne, Germany. Masevhisi anogona zvakare kudiwa kune dzimwe nzvimbo dzeNASA, kontrakta kana subcontractor nzvimbo, kana nzvimbo dzevatengesi.
Chibvumirano ichi chinopa masevhisi erutsigiro eHuman Health and Performance Directorate uye Human Research Program (HRP) paNASA's Johnson Space Center muHouston. Nekudaro, NASA haifungidzire chero chikonzero chekudaidzira vanozvipira kudzidza muUS
Zvidzidzo zvinotsigirwa neHRP zvichashandisa mubhedha wakarereka musoro-pasi seanalogi kune mamwe magadzirirwo emuviri anowanikwa nevazivi vemuchadenga panguva yekubhururuka muchadenga. Tsvagiridzo iyi ine chinangwa chekunzwisisa zvirinani uye kuongorora matanho ekupikisa njodzi dzine chekuita neakareba-refu spaceflight mishoni kusanganisira International Space Station, Artemis uye Gateway zvirongwa.
"Madingindira makuru ekutsvagisa egore rino mashandiro anoita vashandi kana vachishanda vakazvimirira kubva kuMission Control pamwe nerumwe rutsigiro rwePasi uye kushanda kweaya akasiyana masisitimu ekutsigira marudzi aya ekuzvidzivirira," akadaro Brandon Vessey, sainzi wezvekutsvaga. mashandiro uye kubatanidzwa mukati meHRP. "Zvabuda kubva muzvidzidzo izvi zvichabatsira kuzivisa kuti NASA inoronga sei mamisheni ekuongorora remangwana apo vashandi vemuchadenga vachada kushanda vakazvimiririra kubva kuPasi pane zvavari kuita parizvino International Space Station mishoni munzvimbo yakaderera-Earth orbit."
Kondirakiti isingaperi-yekutumira/isingaverengeki-yehuwandu ine yakasimba, yakatarwa-mutengo wemirairo yebasa, inotanga Nov. 23, 2021, uye inoenderera kusvika muna Zvita 31, 2025, pasina chikamu-munguva.